Ny fahatsiarovana ireo izay nilaza fa tsy fahombiazan'ny iPad | Vaovao IPhone
Ny fahatsiarovana ireo izay nilaza fa tsy hahomby ny iPad
Fanatanjahan-tena mahaliana nataon'ny tuaw omaly, rehefa tanteraka izy ireo 3 taona taorian'ny nanombohan'ny iPad ny retrospective hatramin'ny andro voalohany taorian'ny fampidirana ity fitaovana Apple vaovao ity, izay misy maro mpandinika indostria sy manam-pahaizana momba ny teknolojia tsy nisalasala mialoha mendrika ny iPad ho tsy fahombiazana sy mandiso fanantenana, zavatra izay afaka hamafisintsika telo taona fa ny mifanohitra amin'izay no izy.
Tadidio fa teo aloha iPad fandefasana Betsaka ny tombantombana momba ny fahafaha-miditra azon'i Apple miditra amin'ny tsenan'ny takelaka elektronika, miloka bebe kokoa amin'ny mety ho fampifanarahana ny OS X sy izay rehetra dikan'izany. Amin'ny farany, araka ny fantatsika rehetra, tsy izany no izy ary nahita fitaovana iOS hafa teraka izahay, izay navoaka tamin'ny voalohany fanakianana ary fanesoana mihitsy aza avy amin'ny haino aman-jery manampahaizana manokana, ny sasany sahy manome fanantenana kely ny fahombiazana amin'ny famoronana vaovao an'i Steve Jobs.
Ireo faminaniana ireo dia mety hampitsiky antsika ankehitriny ary hahafinaritra antsika mihitsy aza, satria tao anatin'ny fotoana ela ny iPad dia tena fivoaran'ny fivezivezena amin'ny finday, ka hatramin'ny fatra niteraka ny lazain'ny maro ho vanim-potoana "Post-PC".
Anisan'ireo teny nisaina faran'izay mahaliana indrindra nofidian'i tuaw afaka mahita pessimistic somary pessimistic toa an'i David Course avy amin'ny PC World izahay, nosoratana tamin'ny 28 Janoary 2010.
Inona no itovizan'ny iPad vaovao an'i Apple sy ny Nexus One an'ny Google? Samy DOA izy ireo: Diso fanantenana rehefa tonga. Tsy misy na inona na inona amin'ny haavon'ny dokambarotra teo aloha. Samy nivadika ho lamaody fitaovana kokoa noho izy ireo tamin'ny fitaovana revolisionera izay naseho azy ireo.
Fa maninona no diso fanantenana ny iPad? Satria tsy mamela antsika hanao zavatra tsy vita teo aloha izy io. Azo antoka fa manana endrika milamina izy io, nefa misy tombony sy fatiantoka lehibe, ohatra, tsy manana efijery 16: 9 (Widescreen).
Ny iPad dia mivoatra kokoa noho ny revolisionera. Tonga saina ny olona, ​​satria na ny fanovana haingana ny vaovao iPad aza dia hanondro izany. Manontany tena aho hoe: efa nianjera tamin'ny sehatry ny fanodikodinam-bokin'ny tena izy ve i Steve Jobs?
Betsaka no nifantoka tamin'ny zava-drehetra tsy afaka nanao ny iPad Tamin'izany fotoana izany ary na dia ankehitriny aza dia maro amin'ireo teboka ireo no efa lasa taloha, zavatra tena tsy misy fotony izy ireo, jereo fotsiny ny famintinana nataon'i ocwebdesignblog tamin'ny Janoary 2010.
Zavatra tsy vitan'ny iPad:
1. Tsy manana fakantsary io, marina izany, tsy afaka maka sary ianao ary mandefa azy ireo amin'ny alàlan'ny paositra.
2. Tsy misy webcam, marina izany, tsy misy iChat na resaka video Skype.
3. Tsy manana Flash izy, marina izany, tsy afaka mijery NBC, CBS, ABC, FOX na Hulu ianao.
4. Tsy misy seranana ivelany toy ny fidirana mikrô, DVI, USB, Firewire, karatra SD na HDMI
5. Tsy manana multitasking izy io, midika izany fa fampiharana iray ihany no azo alefa amin'ny fotoana iray.
6. Tsy afaka mametraka mihoatra ny Apps avy amin'ny App Store ianao
7. Tsy manohana ny asan'ny SMS, MMS na ny telefaona.
8. Tsy mijery afa-tsy sarimihetsika iTunes, mozika sy boky, izany hoe, vola, vola, vola ho an'i Apple.
9. Tena lafo dia lafo tokoa.
10. Ireo kojakoja dia hanana $ 29.99 farafahakeliny ho an'ny tsirairay amin'izy ireo.
11. Tsy manana GPS feno izy io
12. Tsy manana endrika Native Widescreen
13. Tsy milalao amin'ny 1080P
14. Tsy afaka mitantana rakitra
Russ Wilcox, CEO an'ny E Ink dia nilaza hoe:
E-Readers dia hamidy iPads amin'ny antony tsotra ara-toekarena amin'ny tsenan'ny fitaovana ho an'ny mpanjifa
Ny CEO Google teo aloha Eric Schmidt dia nilaza tamin'ny The Guardian tamin'ny 29 Janoary tamin'io taona io ihany:
Angamba tokony holazainao amiko ny tsy fitovizan'ny telefaona lehibe sy ny takelaka
Nilaza i Donovan Colbert, Tech Republic, tamin'ny 23 Febroary 2010:
Samy efa nandre hevitra tsy tambo isaina isika rehetra momba ny fahombiazan'ny fitaovana fampahalalam-baovao vaovao an'ny Apple. Tsy misy isalasalana fa ny iPad dia fitaovana marefo sy mahatsikaiky, saingy tsy mino aho fa ho fahombiazana lehibe izany.
Amin'ny farany, heveriko fa ny iPad dia hoheverina amin'ny farany toa ny Apple TV, vokatra tokony navelan'i Jobs teo amin'ny tabilao fanaovana sary.
Don Resinger, eWeek, 28 Jan 2010:
Ny iPad dia tsy vokatra revolisionera izay nantenain'ny maro amintsika. Fa kosa, ny fitaovana dia tsy inona fa ny PC Tablet misy rafitra fiasa tokana sy singa iray tena lehibe: ny anarana Apple.
Ny zava-misy fa ny iPad dia avy amin'ny Apple no toetra lehibe indrindra amin'ny fitaovana. Raha tsy nisy ilay sary famantarana Apple any aoriana, dia tsy ho nahazo ny karazana fijerena ny Alarobia ny iPad. Misaotra an'i Apple, fitaovana iray izay tsy revolisionera velively dia nahatratra ny haavon'ny fihobiana izay tsy misy vokatra hafa eny an-tsena afaka manangona.
Bill Gates, CBS News, 20 Febroary 2010:
Fantatrao, mino be aho amin'ny famakiana sy ny famakiana nomerika, saingy mbola mieritreritra aho fa ny fifangaroan'ny feo, ny stilosy ary ny klavier tena izy - amin'ny teny hafa, netbook - no ho lohalaharana amin'izany. Ka tsy mahatsiaro tena ho mitovy amin'ilay iPhone nolazaiko aho hoe: "Oadray, tsy nanana tanjona kendrena avo lenta i Microsoft." Mpamaky mahafinaritra izy io, saingy tsy misy na inona na inona amin'ny iPad mahatonga ahy hijery sy hiteny hoe "Oh, enga anie ka hanana i Microsoft."
Satoru Iwata, filohan'ny Nintendo, New York Times, 29 Janoary 2010:
IPod Touch lehibe kokoa izy io. Manontany tena aho raha toa ka ho ampy hividianana masinina vaovao ireo fiasa ireo.
Charles Golvin, mpandalina Forrester Research, New York Times tamin'ny 28 Janoary 2010
Heveriko fa hahaliana ny Apple acolytes io, saingy iPod Touch lehibe indrindra izy io.
Otto Berkes, mpiara-manorina Xbox ary CTO ankehitriny ny haitao mpanjifa HBO dia tsy dia pessimistic toy ny hafa momba ny iPad, saingy tsy nanaiky ny anarana sy ny haben'ny efijery izy. Ny hevitr'i Berkes dia tena mahaliana satria niasa tamin'ny tetikasa Microsoft Origami izy.
Betsaka ny olona nanontany ahy momba ny fihetsiko tamin'ny iPad.
Tsy hiraharaha ilay anarana toa mahatsiravina aho. IPad? Tena matotra ve?
Ny isa nomen'ny Apple dia fanatanterahana sy famonosana tsara ny haitao misy. Izany dia nilaza fa ny takelaka manify dia vokatra mahatalanjona eo amin'ny sehatry ny fivoaran'ny vanim-potoana fivoarana izay maharitra am-polony taona maro ny fanavaozana sy ny fikatsahana ny nofin'ilay takelaka solosaina.
Amin'ny maha fitaovana azy dia toa somary lehibe sy clunky amiko ny iPad. Amin'ny efijery 7-inch dia misy fifandanjana mety hitranga eo amin'ny fivezivezena sy ny tombony azo amin'ny fijerena efijery lehibe kokoa.
Bruce Berls, Brucebnews , 04 Febroary 2010
Tsy hanova na inona na inona izany, tsy hisolo ny netbook, fa hahita mpihaino marobe sy mahatoky, indrindra aorian'ny fihenan'ny vidiny ary ampiana endri-javatra sasany.
Araka ny vakianao, misy hevitra samihafa momba an'io ary mampino ny maro fa miloka bebe kokoa amin'ny netbooks, izay niafara tamin'ny fanjavonan'ny fotoana. Ny lesoka maro ananan'ny iPad tany am-boalohany dia voavaha tsikelikely noho ny fanavaozana sy ny fanombohana ireo taranaka nifandimby, saingy mazava fa ho an'ireo feo nahazo alalana marobe momba ilay lohahevitra dia tsy nanana fahitana kely izy ireo hankasitraka izay ho avy., zavatra izay azo antoka fa tsy afaka madiodio ny maro amintsika.
Fanazavana fanampiny - Mihodina telo ny iPad
Loharano - tuaw
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny fahatsiarovana ireo izay nilaza fa tsy hahomby ny iPad
Sergio Redondo dia hoy izy:
Mazava fa marina ny maro, indrindra ity farany rehefa nilaza hoe: "Hahita mpihaino marobe sy mahatoky ianao, indrindra aorian'ny fihenan'ny vidiny ary ampiana endri-javatra sasany"; Nohamafisinao fa ianao, José, tao amin'ny fehintsoratra farany. Ankehitriny, aza diso hevitra aho, tiako ny iPad, ary heveriko fa revolisionera izany, saingy marina fa mila fanatsarana ilay voalohany. Ho an'i Kaisara izay an'i Kaisara.
Valiny tamin'i Sergio Redondo
Hatramin'izao .. Ny iPad voalohany .. dia miasa tsara kokoa noho ny ankehitriny maro, na dia tsy manana fampiasa maro aza .. Manana ny ankamaroan'ny fampiharana .. iOS sy iPad no laharana voalohany! Hatrany am-piandohana .. Mazava izany .. Tsy fantatr'izy ireo raha hahomby na handiso fanantenana izany.
Azonao atao ny manitatra ny lahatsoratra amin'ny iOS
SYSTEM Util, fampiharana hanara-maso ny zava-drehetra amin'ny iPhone